About us - Qingdao Topwell Chemical Izinto Co, Ltd.
Qingdao Topwell Chemical Izinto Co., Ltd. esungulwe ngo-2014, umphakeli okhokhelwayo ohileleke ocwaningweni, ekuthengisweni nakwenziwe ngokwezifiso i-pigment kanye nodayi okuhlobana nezinhlobo zokukhanya kwe-UV light, eduze nelanga le-infrared (IR), ukukhanya okubonakalayo.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi,
1.I-UV / IR i-pigment fluorescent nedayi,
2. Eduzane nedayi elimunca infrared
3.Photochromic udayi nombala,
4. Idayi ebonakalayo
5. Umbala we-Thermochromic.
Siphinde futhi sihlinzeke futhi senze ngokwezifiso lo dayi nombala, amadayi we-photochromic welensi yokubuka kanye nefasitela noma ifilimu yemoto, odayi abakhulu be-fluorescent befilimu yendlu eluhlaza kanye nezingxenye ezikhethekile zemoto, umbala omfushane omfushane we-UV fluorescent kanye nombala we-IR womkhakha wokuphrinta wezokuphepha, eduze kwedayi elifunxayo lefoni , i-absorber eluhlaza okwesibhakabhaka, odayi bokuhlunga, amakhemikhali aphakathi nendawo, ama-dyestuff asebenzayo, odayi ababucayi.
Imikhiqizo yethu ithengisa kahle e-USA, Germany, France, Brazil, Japan, nakwamanye amazwe noma izifunda. Sidume ngekhwalithi ephezulu, amanani aphansi, imisebenzi yezandla yokuqala, iphakethe eliphephile, nokulethwa ngokushesha.
Samukela ngobuqotho abangane abavela emhlabeni wonke ukuvakashela inkampani yethu futhi abambisane nathi ngesisekelo izinzuzo eside mutual.